KyiMayKaungBurmese: U.S. Capitol police officer killed after car attack--
U.S. Capitol police officer killed after car attack--
Posted by Kyi May at 19:10
စာရေးသူ ဒေါ်ကြည်မေကောင်း ဟာ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု ဖီလာဒဲလ်ဖီးယားမြို့ (Philadelphia) ရဲ့ အထင်ကရ နာမည်ကျော် တက္ကသိုလ် တစ်ခု ဖြစ်တဲ့ ပင်စီရယ်(လ်)ဗေးနီးယား (Pennsylvania) တက္ကသိုလ် ကနေ နိုင်ငံရေး ဘောဂဗေဒ ဘာသာရပ် နဲ့ ဒေါက်တာ ဘွဲ့ယူခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။ စာရေးသူ ဟာ ၁၉၈၀ အစောပိုင်း နှစ်များမှာ Fulbright Fellowship အစီအဉ် နဲ့ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု ကို စတင် ရောက်ရှိ ခဲ့ပါသည်။
စာရေးသူ ဟာ ဘ၀ တစ်လျှောက် လုံး အနုပညာ ကို လေ့လာ လိုက်စား ခဲ့ပြီး အထူးသဖြင့် စာပေနဲ့ ပန်းချီ ပညာပိုင်းကို ပိုမို အားသန် ခဲ့ပါတယ်။ သူမဟာ ဆယ်ကျော်သက် အရွယ် ကတည်းက စာတိုပေစများ စတင် ရေးသားခဲ့သူ တစ်ယောက် လည်း ဖြစ်ပါတယ်။
နာမည်ကျော် အမေရိကန် ပြဇာတ် ရေးဆရာကြီး Edward Albee ကိုယ်တိုင် သူမရဲ့ နတ်ကတော် အကြောင်း ရေးထား တာကို ချီးမွမ်း ခဲ့ ရပါတယ်။ Pew စာပေဆု အတွက် နောက်ဆုံး အဆင့်ကို နှစ်ကြိမ် တိုင်တိုင် ရောက်ခဲ့ပြီး ၂၀၀၈ ခုနှစ်မှာ ချီကာဂို Northeastern Illinois တက္ကသိုလ် ကြီးက သူမရဲ့ ဗမာ့အရေး ဆောင်ရွက်မှု နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆု ချီးမြှင့် ခဲ့ပါတယ်။
စာရေးသူဟာ ရန်ကုန် စီးပွါးရေး တက္ကသိုလ်မှာ ကထိက အဖြစ်နဲ့ အနှစ် ၂၀ လောက် အမှုထမ်း ခဲ့ပြီး Fulbright Fellowship ရရှိခဲ့ပါသည်။
စာရေးသူဟာ ၁၉၉၇ ခုနှစ် ကတည်းက ဗမာပြည် အဝေးရောက် အစိုးရ၊ Burma Fund တို့ နှင့်အတူ နိုင်ငံတကာ အသံလွှင့် ဌာန မှာ အလုပ်လုပ် ခဲ့ပါသည်။
Academy of American Poets ကနေ စာရေးသူ ရေးသားခဲ့တဲ့ ပထမဆုံး ကဗျာ (၅) ပုဒ်အတွက် William Carlos Williams ကဗျာဆု ကို ချီးမြှင့်ခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၉၄ ခုနှစ်ကစပြီး အရှေ့တောင် အာရှ နိုင်ငံများ၊ ကနေဒါ နှင့် မြောက်အမေရိကား တို့က တက္ကသိုလ်တွေ၊ ခရစ်ယာန် ဘုရားကျောင်းေ တွေမှာ (၁၂) ကြိမ်ထက် မနည်း ကဗျာများ ရွတ်ဆို ခဲ့ပါတယ်။ ယခုလက်ရှိ ၀ါရှင်တန် ဒီစီ မှာ အခြေစိုက် ပြီး ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ချင်းမိုင်မြို့၊ အင်ဒိုနီးရှား ဘာလီကျွန်း၊ မြောက်အမေရိကား နှင့် အခြားသော နေရာများမှာ စာရေးသူ ဟာ သူမရဲ့ တစ်ကိုယ်တော် အမျိုးသမီး အနုပညာ ပြပွဲများကို (၁၀) ကြိမ်ခန့် ပြုလုပ် ခဲ့ပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၀ နိုဝင်ဘာ လ တွင် သူမသည် SULU DC ခေါ် အာရှ - အမေရိကန် နိုင်ငံရေး လှုပ်ရှား သူများ ကဗျာအသင်းမှာ ကဗျာ ရွတ်ဆို ခဲ့ပါတယ်။ SULU DC ဟာ ဗမာပြည်မှာ ထောင်ဒဏ် ကျခံ နေရတဲ့ ဗမာ့ လူရွှင်တော် ဇာဂနာ အကြောင်း ရိုက်ကူး ထားတဲ့ မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ကို ပြသ လျှက် ရှိပါတယ်။
ယခု လောလောဆယ် မှာတော့ စာရေးသူဟာ “The Black Prince of Siam” လို့ အမည်ရတဲ့ ယိုးဒယား သမိုင်း ၀ထ္ထု တစ်ပုဒ်ကို ရေးသားနေ ပါသည်။
Dr Maung Zarni's website/blog
Kyi Kaung | Red Room Member Profile | Red Room
India Covid 2nd wavea"tsunami."https://www.thegu...
Australian Co involved in gold mining in Shan Stat...
Burma-Jade and the Juntahttps://www.aljazeera.com/...
Mehdi Hassan interviews Noam Chomskyhttps://www.yo...
Artifacts found at childhood home site of Harriet ...
Merrick Garland launches investigation of MN Polic...
Concert time--Allie Sherlock sings, Presley's I ca...
"Knee on neck" former police officer Chauvin found...
Myanmar Coup--don't fool yourself, things are not ...
Pritzker activating Illinois National Guard for Ch...
This isaTravesty of Justice--This isatravesty ...
DW--Myanmar Coup--more than 700...
Controversial Russia expert no longer in running f...
Set in Chile and America--my novella The LoversOri...
Kyi Kaung@KyiKaung·1mIn these three riveting stori...
Russian Novichock poisoning suspects linked to Cze...
Czech Republic expels Russian "diplomats" over amm...
My short story--FGMIt happens in Africa and someti...
My short stories--from Burma-Thai Border--Dancing ...
Burmese general Min Aung Hlaing to attend ASEAN, m...
Myanmar coup--36 protestors arrested in one day, i...
Burma-Thai relations--my novella The Rider of Croc...
Racial tension in Burma--my novella Black Rice.htt...
Prince Philip's funeral land rover-- Sky News@SkyN...
My novel Wolf followsastudent leader of 1988, th...
How to help Myanmar coup survivors --
Egypt impounds Evergiven--which got stuck in Suez ...
Keep wearing your mask even after vaccination + ht...
Myanmar coup--Bago Massacre--https://www.cbsnews.c...
House overides Hogan veto of police reform bill MD.
DVB in Burmese --Myanmar Coup--617 dead, 2800 arre...
All out war in Burma--Myanmar Coup1 of 2All out wa...
Myanmar coup--explosives being used against protes...
Pathologist--George Floyd died due to police offic...
Myanmar coup--celebrity model among 2700+ arrested...
pence book deal--
From 2013--Ron Zakreski--OnaShort Leash: Detaine...
Covid updates: Don't travel to Canada, Astra Zene...
Mozart's Zaide --https://www.youtube.com/watch?v=z...
WH gusher of leaks under trump vs Biden Admin--htt...
In Burmese and English--10 year old shot in Moulm...
Aung Zaw--"From Russia with Love" Myanmar and Burm...
Irrawaddy--Rangoon--Fire in military malls raises ...